Trafika sokatra 10.000: karohina i Lahady Lydjé | NewsMada
Trafika sokatra 10.000: karohina i Lahady Lydjé
Namoaka didy fampisamborana an’i Lahady Lydjé (34 taona), ny 20 novambra 2018 teo, ny fitsarana ady heloka bevava any Toliara, mikasika ny fikasana hanondrana sokatra radiate, miisa 10.073, tany ivelany. Nitsoaka ity lehilahy ity, raha nosazin’ny fitsarana, ny 25 oktobra 2018 teo, higadra enin-taona sazy mihatra, miampy fandoavana lamandy 100 tapitrisa Ar sy onitra 30 tapitrisa Ar. Voaheloka niaraka taminy koa Ramanandraibe Odams Maximin, Vesoa Ordène ary Randrianarison Pulchène Colombe, samy mamita ny saziny ao amin’ny fonja any Toliara. Teraka ny 6 febroary 1984 tany Antalaha i Lahady Lydjé, monina any Toliara. Zanak’i P. sy M.B.
Sazy faran’izay henjana
Araka izany, manaitra ny rehetra ny fitsarana Toliara hampandre ny mpitandro filaminana sy ny manampahefana akaiky azy indrindra raha vao mahalala na mandre vaovao mikasika ity lehilahy, voaheloka amin’ny trafika sokatra ity.
Sambany nisian’ny didy fampisamborana amin’ny raharaha sokatra toy izao. Tsiahivina fa maro ny sokatra tratra tsy ara-dalàna tany Toliara, ary maromaro koa ny olona tratra. Andrasana ny hampiharana ny sazy farany izay henjana sy ny hikarohana ny tena atidoha, hatrany amin’ny vahiny mpandray any ivelany.